6000 စီးရီးလူမီနီယမ်အလွိုင်းပြား - တရုတ်ဟန်ကျိုး Jinding လူမီနီယမ်
custom ဖြေရှင်းချက် Guoxin 7000 စီးရီးမှ 1000 စီးရီးထဲကနေလူမီနီယမ်တန်းနှင့်အတူလူမီနီယံအလွိုင်းပိုက်များနှင့်ချောင်းများကိုကိုလည်းလူမီနီယံအလွိုင်းပြားနှင့် profile များကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သောလူမီနီယံအလွိုင်းတန်း, သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဤ 6000 စီးရီးလူမီနီယံအလွိုင်း၏အပူကုသမှုအဖြစ်သင့်လိုအပ်ချက်ကိုပြောပြ ကျေးဇူးပြု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့အထုံးစံလူမီနီယံအလွိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုဖြေရှင်းချက်နှင့်ထုတ်ကုန်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမီနီယမ်အလွိုင်းကုန်ပစ္စည်းများ 6061 လူမီနီယမ်အလွိုင်းပြား 6061 လူမီနီယံအလွိုင်းစက်မှုဇုန် stru အောင်အသုံးပြုသည်အကြံပြု ...
Guoxin 7000 စီးရီးမှ 1000 စီးရီးထဲကနေလူမီနီယမ်တန်းနှင့်အတူလူမီနီယံအလွိုင်းပိုက်များနှင့်ချောင်းများကိုကိုလည်းလူမီနီယံအလွိုင်းပြားနှင့် profile များကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သောလူမီနီယံအလွိုင်းတန်း, သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဤ 6000 စီးရီးလူမီနီယံအလွိုင်း၏အပူကုသမှုအဖြစ်သင့်လိုအပ်ချက်ကိုပြောပြ ကျေးဇူးပြု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့အထုံးစံလူမီနီယံအလွိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုဖြေရှင်းချက်နှင့်ထုတ်ကုန်ပေးနိုင်ပါသည်။
6061 လူမီနီယံအလွိုင်းထိုကဲ့သို့သောကုန်တင်ကား, မျှော်စင်အဆောက်အဦ, သင်္ဘောများ, အလင်းရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်, ပရိဘောဂ, စက်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဟင်းပွဲများ, အရက်ဆိုင်, ပန်းကန်နှင့်ပရိုဖိုင်းအဖြစ်မြင့်မားသောခွန်အားနှင့်စက်မှုအဆောက်အဦများ, အောင်အသုံးပြုသည်, တိကျစွာစက်, etc
si Fe Cu MN mg CR Zn ti အခြားသူများက အယ်လ်
6061 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 0.40-0.8 0,70 0.15-0.40 0,15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0,15 တစ်ခုတည်း: 0.05; စုစုပေါင်း: 0,15 ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
ဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ (25 ° C မှ MPa) အထွက်နှုန်းတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ (25 ° C မှ MPa) ခိုင်မာသော 500kg 10 မီလီမီတာ elongated 1.6mm (1 / 16in) အထူ max ကိုညှပ်စိတ်ဖိစီးမှု (MPa)
6061-T651 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 310 276 95 12 205
အလွန်ကောင်းသည် မဆိုးပါဘူး ကောင်းသော 40-50 2,73
6A02 လူမီနီယမ်အလွိုင်းပြား 6A02 လူမီနီယံအလွိုင်း, လေယာဉ်ပျံအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ, ရှုပ်ထွေးသောပုံအတုလုပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုအောင်အတွက်အသုံးပြုအတုလုပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများသေဆုံး, စတာတွေဖြစ်ပါတယ်
6082 လူမီနီယမ်အလွိုင်းပြား 6082 လူမီနီယံအလွိုင်းထိုကဲ့သို့သောလေကြောင်းလ်တာ, ထရပ်ကားများ, မျှော်စင်အဆောက်အဦ, သင်္ဘောများ, ပိုက်လိုင်းများအဖြစ် weldability နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိ, ချေးခံနိုင်ရည်လူမီနီယံအလွိုင်းထုတ်ကုန်အောင်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒီအလူမီနီယံအလွိုင်းလေယာဉ်တင်အစိတ်အပိုင်းများကိုလုပ်ဖို့လည်းသုံးနိုင်တယ်, ကင်မရာမှန်ဘီလူး, couplers, အဏ္ဏဝါဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ, အီလက်ထရောနစ် fittings နှင့် connectors, အလှဆင်ဟာ့ဒ်ဝဲ, ဦးခေါင်း, ဘရိတ်ပစ္စတင်, ရေ piston, လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်များ, အဆို့ရှင်နှင့်အဆို့ရှင်အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်တွင်မူတည်။
အောက်ပါအတိုင်း Guoxin 6000 စီးရီးလူမီနီယမ်အလွိုင်းဟင်းပွဲများကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်
6061 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 0.4 ~ 0.8 0.7 0,15 ~ 0.4 0,15 0.8 ~ 1.2 0,04 ~ 0.35 0.25 0,15 ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
6A02 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 0.5 ~ 1.2 0.5 0.2 ~ 0.6 0,15 ~ 0.35 0.45 ~ 0.9 - 0.2 0,15 ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
6082 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 0.7 ~ 1.3 0.5 0.1 0.4 ~ 1.0 0.6 ~ 1.2 0.25 0.2 0.1 ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
6005 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 0.6 ~ 0.9 0.35 0.1 0.1 0.4 ~ 0.6 0.1 0.1 0.1 ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
6010 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 0.8 ~ 1.2 0.5 0,15 ~ 0.6 0.2 ~ 0.8 0.6 ~ 1 0.1 0.25 0.1 ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
6063 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 0.2 ~ 0.6 0.35 0.1 0.1 0.45 ~ 0.9 0.1 0.1 0.1 ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
6066 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 0.9 ~ 1.8 0.5 0.7 ~ 1.2 0.6 ~ 1.1 0.8 ~ 1.4 0.4 0.25 0.2 ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
6070 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 1.0 ~ 1.7 0.5 0,15 ~ 0.4 0.4 ~ 1.0 0.5 ~ 1.2 0.1 0.25 0,15 ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
6101 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 0.3 ~ 0.7 0.5 0.1 0.03 0.35 ~ 0.8 0.03 0.1 - ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
6151 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 0.6 ~ 1 1 0.35 0.2 0.45 ~ 0.8 0,15 ~ 0.35 0.25 0,15 ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
6201 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 0.5 ~ 0.9 0.5 0.1 0.03 0.6 ~ 0.9 0.03 0.1 - ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
6262 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 0,15 ~ 0.4 0.4 ~ 0.8 0.7 0,15 0.8 ~ 1.2 0,04 ~ 0,14 0.25 0,15 ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
6351 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 0.7 ~ 1.3 0.5 0.1 0.4 ~ 0.8 0.4 ~ 0.8 - 0.2 0.2 ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
6463 လူမီနီယမ်အလွိုင်း 0.2 ~ 0.6 0,15 0.2 0.05 0.45 ~ 0.9 - - - ကြွင်းသောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
ယခင်: 2000 စီးရီးလူမီနီယမ်အလွိုင်းပြား
နောက်တစ်ခု: 7000 စီးရီးလူမီနီယမ်အလွိုင်းပြား
1060 5052 5083 လူမီနီယမ်ပြား
5083 5mm ခုနှစ်တွင်နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်ဘားသည်လူမီနီယမ်ပြား
5083 H321 လူမီနီယမ်အလွိုင်းပြား
6061 T651 လူမီနီယမ်အလွိုင်းပြား
6061 T651 လူမီနီယမ်ပြား
လူမီနီယမ်ပြား 6061 T6
Automobile Industries, လူမီနီယမ်အလွိုင်းပြား